Better HR Blog – Digital HR Solutions
HR လုပ်ငန်းစဉ်များကို တီထွင်ဆန်းသစ်ခြင်း
In Managing HR
HR လုပ်ငန်းစဉ်များကို တီထွင်ဆန်းသစ်ခြင်း HR နဲ့ဆိုင်တဲ့ Innovation ကိုမပြောခင် ကမ္ဘာမှာ innovation လုပ်ကြတဲ့အခါမှာ ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူ အောင်မြင်မှုတွေရတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေထုနဲ့ထည်ရှိကြတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် Steve Jobရဲ့ Apple product iPhone တွေဟာဆိုရင် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် လူအများနှစ်ကြိုက်ကြပြီ Brand တစ်ခုအနေဖြင့်တန်ဖိုးထား ဝယ်ယူကိုင်တွယ်ကြပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Lab Grown Meat...
How to save administration time in your HR department
Nowadays, the human resource department plays an active role in managing every part of the organization and considers as strategic partners of the organization. Earlier, employee attendance was recorded by using punch machines. This approach resulted in certain difficulties like manually checking the employee time logs. But with the HR management system and HR Apps can check time tracking, submit...
HR တွေရဲ့ SSB တွက်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့ ဝန်ထမ်းလစာတွက်ချက်တဲ့အခါမှာ ဝန်ထမ်းရဲ့ခံစားခွင့်တွေဖြစ်တဲ့ အခြေခံလစာ၊ လုပ်သက်ဆုကြေး၊ ကျွမ်းကျင်မှုကြေး၊ လမ်းစရိတ်၊ အချိန်ပိုကြေး တို့အားပေါင်းလိုက်လျှင် စုစုပေါင်းလစာရမယ်။ အဲဒီ စုစုပေါင်းလစာထဲမှ ဝန်ထမ်းပေးဆောင်ရမယ့် ဝင်ငွေခွန်၊ လူမှုဖူလုံရေးကြေး (SSB) ၊ ခွင့်မဲ့တွေ၊ ကြိုထုတ်ငွေတွေကို နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဝန်ထမ်းလက်ထဲကို ရောက်လာမယ့် အသားတင်လစာဆိုပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ လူမှုဖူလုံရေးကြေး...
HR ဌာနအတွက် လစာတွက်ချက်ခြင်း
HR Function တွေထဲမှာ ဝန်ထမ်းလစာတွက်ချက်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းဟာလည်း HR ပညာရပ်နဲ့အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းပြုနေသူတွေအတွက် မသိမဖြစ်သိရမယ့်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Payroll အပိုင်းဟာ Compensation & Benefits Function အောက်မှာရှိပါတယ်။ HR က ကျန်တဲ့ Function တွေမလုပ်ရင်သာရမယ်၊ လစဉ်ဝန်ထမ်းလစာတွက်ခြင်းကိုတော့ မလုပ်လို့ကိုမရပါဘူး။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုပ်အားနဲ့ရင်းထားရတာဖြစ်လို့ လစာပေးရပါမယ်။ ဒါကြောင့် payroll management...
HR လောကရဲ့ Trend ကြီးခြောက်ခု
ကမ္ဘာကြီးဟာ ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်လာပြီးဆိုပြီ လူတွေပြောနေကြတယ်။ ပြောင်းလဲမှု (change) ကိုလက်ခံပေးမှကိုရတော့မယ့် အခြေအနေဖြစ်လာပြီ။ ခေတ်နဲ့အညီပြောင်းလဲမှု မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေ လူ့ပတ်ဝန်ကျင်အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ ကျန်ခဲ့ရတော့မယ် နယ်ပယ်တိုင်းမှာ စပြီး Change ကိုလက်ခံနေကြပြီ။ အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ change ကို လက်ခံရတော့မယ်။ ပြောင်းလဲမှုကို စိန်ခေါ်နိုင်မှ အမြတ်အစွန်းရတော့မယ့်...
How mobile apps can playabig part in HR modernization
In the 21st century, the world is changing faster than ever and digital technology is at the heart of it. Most businesses and HR officers are looking at investing in technology to modernize their HR processes. Making that technology work in real-time on employees’ smartphones will boost employee engagement, productivity as well as retention. Here’s how. Why smartphones? We use our smartphones for...